Laba Khalad Oo Uu Saxay Garsooraha Mac-malka Ah Oo Ka Dambeeyey Guushii Spain Ay Ku Muquunisay France
HomeWararka MaantaLaba Khalad Oo Uu Saxay Garsooraha Mac-malka Ah Oo Ka Dambeeyey Guushii Spain Ay Ku Muquunisay France
Garsooraha-macmalka ah “Video technology” ayaa loo adeegsaday si loogu saxo laba go’aan oo khaldan oo ay qaateen garsoorkii caadi ahaan ciyaarta u dhex-dhexaadinayay, taas oo xulka Spain u horseeday inay kaga adkaadaan xulka France, ciyaartii saaxiibtinimo ee ku dhex
martay magaalada Paris.
Weeraryahanka xulka France ee Antoine Griezmann ayaa shabaqa ku ruxay kubad madax ah, isla markaana u damaashaaday ilaa daqiiqado kadib garsoorihii macmalka ahaa go’aamiyey inay kubaddaasi ahayd ‘offside’ sidaasna lagu diiday.
Iyadoo goolkii labaad ee xulka Spain dhaliyeen, kaas oo u saxeexay ciyaaryahan Gerard Deulofeu, oo calanwidihii ciyaartu ku tilmaamay inuu ahaa ‘offside’ garsoorka macmalka ahi go’aankii saxda aha aka daba keenay, lagana dhigay gool sax u dhashay.
David Silva ayaa gool dhalinta ciyaarta ku furay kubad rigoodhe ah oo uu dhaliyey, kadib markii Laurent Koscielny uu xerada ganaaxa ku dhex xanaaqadeeyey Deulofeu.
Muuqaalada garsoor caawiyaha ah – ama Video Assistant Referee (VAR) ayaa imika ciyaaraha u qabta si tijaabo ah, iyadoo uu madaxweynaha FIFA aad u doonayo in barnaamijkani noqdo mid dhaqan gal ah marka la gaadho ciyaaraha koobka aduunka ee sanadka dambe Ruushku marti galinayo.
Netherlands 2-3 France: France Oo Guul Gaadhay Ciyaaro Murugo Hadhaysay